Yubaraj Chaulagain Biography | Hamro Kalakar
Facts of Yubaraj Chaulagain
Contact Yubaraj Chaulagain
Suggestion for Yubaraj Chaulagain
Yubaraj Chaulagain is Singer. His marital status is Single. His height is5feet9inches. His favorite color is Black, favorite movie is Chino, favorite place is Sauraha, Chitwan.
स्कुलमा शिक्षकले युवराजको स्वरको प्रशंसा गर्थे । युवराज मख्ख पर्थे । शुक्रबार उनैले गीतमा भाका हाल्नु पथ्र्यो । शिक्षकको अनुपस्थितिमा उनले सबैलाई गीत सुनाउँथे । गाउँमा हुने कार्यक्रमहरूमा उनकै फर्माइस हुन्थ्यो । गाउँमा एक, दुई र पाँचका नोटको माला उनेर लगाइदिएर गीत गाउन लगाउँथे ।
युवराज मार्सल आर्टका खेलाडी पनि हुन् । जिल्लामा उनी अब्बल मार्सल आर्टका खेलाडीमा गनिँदै थिए । स्थानीय प्रतियोगितामा सहभागी हुन्थे । सफलता हात पर्दै थियो । ब्ल्याक बेल्ट हात पारे । उनलाई राष्ट्रिय खेलाडी हुने रहर थियो ।
बालपन न हो– सपनाहरू कति आउँछन्, कति जान्छन्– पत्तै हुन्न । अनेक सपना देख्ने र टुसाउन नपाउँदै चुँडिने उमेर यही हो । मार्सल आर्टको राष्ट्रिय खेलाडी हुने उनको सपना पनि ठडिन नपाउँदै भत्किजाने बालुवाको घरसरि भयो ।
गीत गाउन युवराज काठमाडौं छिरे २०५८ मा । साँझको घुर्मैलो अँध्यारोमा काठमाडौं छिर्दा जस्तो दृश्य देखिन्थ्यो, वास्तवमा उनका लागि त्यो जिन्दगीकै संकेत भयो ।
गीति एल्बम निकाल्ने लहलहाउँदो सपना साँचेर आएका युवराज महासागरमै हराए । न यहाँ त्यति सजिलै गीतकार, संगीतकार र एरेन्जर भेटिन्थे, न भेटिएकाले पत्याउँथे ।
युवराज धाउन थाले संगीत गुरुहरूकहाँ । सिक्न थाले संगीत । कहिले साधना त कहिले डोरमी । जहाँ सिक्न पाइन्छ, त्यहीँ पुग्थे । जहाँ कुशल गुरु हुन्छन्, उनी त्यहीँ पुग्न थाले । संगीत सिक्नका लागि हार्मोनियमको जोरजाम गरे । त्यसैमा एकचित्त हुन थाले । संगीत सिक्ने कुनै समय थिएन । जति बेला पनि हार्मोनियममै औंलाहरू रेट्न थाले । त्यसकै धूनसँगै आफ्नो गला मिलाउन थाले ।
उनको चिनजान युवक गौतमसँग भयो । युवकले ‘तिमीलाई चाहनु मैले मेरो भूल हो भने...’, ‘मेरा यी चोर आँखा...’का गायक श्यामसुन्दर आचार्यसँग भेटाइदिए । उनले युवराजलाई बाटो देखाए ।
युवराज, बाबु बोगटी, अर्जुन पोखरेल र दीपक गौतम मिलेर आचार्यसँगै सिक्न थाले । सत्य–स्वरूप लगायतका गायकहरू आउँथे । सांगीतिक माहोल बन्यो । युवराज एकचित्त भएर सिक्न थाले ।
यो क्रम लामो समय चल्यो । “बिहान उठ्यो, हार्मोनियममा बस्यो । खाना खायो, हार्मोनियममा फेरि बस्यो । दिउँसो अल्छी लाग्यो भने केही समय पुतलीसडकतिर निस्कियो,” उनी सम्झन्छन्, “फेरि उही कर्म । न सुत्ने ठेगान थियो, न उठ्ने । एउटै काम थियो । बजाउने र गाउने ।”
काठमाडौं छिरेसँगै गल्र्याम्गुर्लुम्म ढलेको उनको आत्मविश्वास ६ वर्षपछि माथि उक्लिँदै थियो । सांगीतिक आकाशमा आफ्नो स्वर परीक्षण गर्ने रहर जाग्यो ।
गुरु श्यामसुन्दरलाई युवराजले एउटा गीत गाउनु पर्यो भने । उनले पनि हुन्छ भने । उनैले युवराजलाई गीत कम्पोज गरिदिए । सेमी क्लासिक जानराको गीतको बोल थियो– ‘तिमीले बुझ्न सकिनौ...।’ गीत पुतलीसडकको म्युजिक नेटवर्क स्टुडियोमा रेकर्ड भइरहेको थियो । युवराजलाई अहिले घुर्मैलो यादमात्रै छ । शायद ती व्यक्ति अमृत गुरुङ हुनुपर्छ । युवराजलाई श्यामसुन्दरले लय र ताल कन्ट्रोल रुमबाट सिकाइरहेका बेला गुरुङले भनेका थिए, “यो भाइ को हो ? एकदमै राम्रो बेस भोकल छ । भाइको भविष्य उज्ज्वल छ ।” भित्रैबाट सुनिरहेका युवराजको मन प्रफुल्लित भयो । जोशको पर्खाल उचालियो ।
‘मेरो मायालाई तिमीले बुझ्न सकिनौ...’ गीत स्रोताले मन पराए । एफएमहरूबाट निकै बज्यो । युवराजलाई यसले ऊर्जा दियो । गीतको प्रतिक्रिया राम्रो आएपछि उनलाई एल्बम निकाल्ने लोभ लाग्यो ।
बिजु वज्रको ‘साँझ पख...’ गीत राखे । जेम्स प्रधान, महेश खड्का, भूपेन्द्र खड्का, राजु सिंहलगायतको शब्द र संगीत लिए । एल्बमका लागि गीत गाए । एल्बम तयार भयो । उनलाई लाग्यो, अब म ‘हिरो’ भएँ । हुन पनि त्यो समय त्यस्तै थियो । एल्बमलाई म्युजिक कम्पनीले पत्याउनु नै संसार जितेसरह हुन्थ्यो ।
समय सधैं आफ्नै पक्षमा हुन्न । बाटाहरू सधैं सरल हुन्नन् । उकाली र ओरालीहरू हुन्छन् । मोड अनि ढिस्काहरू हुन्छन् । तिनलाई छिचोल्नुपर्छ । युवराजको पनि यही अवस्था भयो । ५ वटा म्युजिक कम्पनीमा एल्बम छाडे तर कसैले पनि ‘रेस्पोन्स’ गरेन ।
‘रिमेक’को जमाना थियो । पप गीतहरू चलिरहेका थिए । आधुनिक गीतहरू सुस्ताएको समय थियो । रगत पसिना मिसाएर तयार पारेको एल्बमको उपहास देखेर युवराज वेचैन हुन्थे । ‘फ्रस्टेसन’ हुन्थ्यो । दाइले विदेश आइज भन्थे तर उनलाई संगीतको डोरीले बाँधिरह्यो । न उनी विदेश पलायन हुन सके, न काठमाडौं छोडेर चितवनै फर्किन सके ।
एकदिन म्युजिक डटकमबाट उनलाई फोन आयो । सुरेश श्रेष्ठले आफ्नो स्टाफलाई फोन गर्न लगाएका थिए । ‘साँझ पख...’ गीत मन पर्यो, अब यहीबाट बजारमा लैजाऊँ भने । उनले अन्तिममा भने, “म म्युजिक डटकमबाट हैन, रियाजबाट हो, तिमीले कहाँ–कहाँ एल्बम दिएका छौ भनेर चेक गरेको ।”
एल्बम निकाल्ने ‘डन’ भएको एक वर्षसम्म गीत बजारमा आएन । ‘रिमिक्स’ र ‘रिमेक’को जमाना भएको हुँदा कम्पनीले उचित ‘टाइमिङ’ खोजे । युवराजलाई भने तनाव भयो । उनलाई दाइले फेरि विदेश बोलाए । तर, उनले जवाफ फर्काए, “म संगीतमा लागिसकेँ, अब आउँदिनँ । तपाईंहरू मेरो चिन्ता नलिनुस् ।” उनी हरेक दिन कम्पनी धाउँथे ।
एक वर्षपछि ‘साँझ पख...’को भिडियो गर्ने कुरा भयो । सुरज शाहले हरि हुमागाईं, रीता भट्टराई र युवराजलाई भिडियोमा अभिनय गराए । गीत बजारमा आयो । दर्शक÷स्रोताले औधी रुचाए । युवराजलाई गीत गाउने अफर आउन थाल्यो । गीत इमेज अवार्डका चार विधामा ‘नोमिनेसन’ भयो । कालिका एफएमबाट अवार्ड पाए ।
हाइ रेन्जको गीत थियो । यस्तो गीत गाउने गायक–गायिका कमै छन् नेपालमा । ‘जीवन के हो...’ युवराज आफैंले कम्पोज गरेको गीत थियो । निर्देशक दिनेश राउत त्यो हाइ रेन्जको बोल्ड गीत सुनेर प्रभावित भएका थिए । उनले चलचित्र ‘नोभेम्बर रेन’को ‘तिमीलाई के भनौं...’ गीत युवराजबाहेक अरुले गाउन नसक्ने भन्दै खोजी गरे ।
गणेश शाहले पनि दिनेशलाई नै यो गीत फिट हुन्छ भनेर सिफारिस गरे । दिनेशले युवराजलाई बोलाए । ताराप्रकाशको कम्पोज रहेको गीत बागबजार कन्या क्याम्पसछेउको रोडमा बाइकमै बसेर मोबाइलमा डमी सुनाए । गीत युगल थियो । फरक भए पनि युगल नभइदिएको भए हुन्थ्यो भने । र, सोधे, “सोलो गीत छैन ?”
युवराजलाई दिनेशले भाञ्जा भन्ने गर्छन् । उनले भने, “हेर भाञ्जा, यो गीतले तिम्रो करिअरमा उथलपुथल ल्याउँछ ।”
‘तिमीलाई के भनौं...’ बाट युवराजले त्यो वर्षका अधिकांश अवार्ड हात पारे । बहुलठ्ठीझैं संगीतमा लागेका युवराज भन्छन्, “यो सम्पूर्ण सफलताको श्रेय दिनेश मामा र क्लासिकलाई जान्छ । राजन इशान, राजु सिंह र श्यामसुन्दर आचार्यलाई म सधैं नमन गर्छु ।”
‘तिम्रा डोला डोला हातमा...’, ‘हारेँ हारेँ...’, ‘लैजा चरी...’, ‘हरेक शब्द...’ र ‘६ एकान ६...’ आदि लोकप्रिय गीतमा उनकै स्वर छ ।
Yubaraj Chaulagain Photo Gallery
Yubaraj Chaulagain Videos
गायक युवराज चौलागाई अनु शाहसंग रोमान्स गर्दै
✓ Himal Sagar Gautam